नयाँ भेरियन्टले अचानक निमोनिया गराउँछ – Nepal Japan
नयाँ भेरियन्टले अचानक निमोनिया गराउँछ
होम आइसोलेसनमा बस्नु भएका संक्रमितहरुले ध्यानदिनुपर्ने कुराहरु
- डा. रवीन्द्र पाण्डे २० बैशाख १०:५६
नयाँ भेरियन्टको कोरोना संक्रमणले तीब्रता लिइरहँदा देशभरका कोभिड अस्पतालहरु भरिएका छन् । संक्रमितहरुको मृत्युदर बढिरहेको छ । यस्तोमा होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुको सख्या पनि ठूलो छ ।
घरमै बसेका संक्रमितहरुका लाग जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले सामाजिक सञ्जालबाट दिनुभएको सुझाव यस्तो छ
१. थर्ममिटरबाट तापक्रम नापिरहनुहोला । ९८ – ९९ फरेनहाइटसम्म व्यक्ति अनुसार नर्मल तापक्रम हो । १०० पुग्यो भने पारासिटामोल खानुहोला । शरीर दुखेमा / टाउको दुखेमा पनि पारासिटामोल खान सकिन्छ ।